I-China ijika ngokukhawuleza iprototype yegolide yesingxobo sePC kunye nabavelisi bomngxunya wokuntywila kunye nabathengisi | Kangna
ukujika okukhawulezayo komzekelo wegolide we-PCB kunye ne-Counter hole hole
Min ubungakanani umngxuma: 0.30mm
Kugqityiwe ubukhulu bebhodi: 1.20mm
Umbala wesigqubuthelo sesolder: luhlaza “
Ixesha Lead: iintsuku 3-4
Umbala we-Solder mask: luhlaza ''
Isigaba sokubonisa ixesha lelona xesha libaluleke kakhulu kwinkqubo yophando kunye nophuhliso.
Ukunciphisa ixesha lophando kunye nophuhliso, ufuna ukuba umenzi wePCB avelise prototype ngokukhawuleza.
Emva koko kwavela uhlobo olukhawulezayo lokujika.
Kuba PCB imveliso, Kangna unamava lemveliso PCB ngaphezu kweminyaka eli-14 (ukususela ngo-2006). Ukukhetha kwethu kunokunciphisa kuphela ixesha lokuvelisa le-PCB kodwa kunciphisa iindleko kwaye ufumane iibhodi ezikumgangatho ophezulu. Sinokukunika iprototype ekumgangatho ophezulu kunye nexesha elifutshane lemveliso ngexabiso lokhuphiswano.
Ngokwesiqhelo, ukuba indawo iyonke ye-odered PCB yakho ingaphantsi kwe-0.1 yemitha yesikwere, sithatha iodolo njengeprototype.
Akukho MOQ inomda, nokuba uyalela i-PC enye, siya kuyamkela ngokungxamisekileyo i-odolo.
Ixesha eliqhelekileyo lokukhokela ziintsuku ezi-5 zecala elinye kunye neebhodi ezimbini zokubeka, iintsuku ezisi-7 zongqimba olu-4, iintsuku ezili-9 ngolwe-6, iintsuku ezili-10 ngolwe-8, iintsuku ezili-12 kwibhodi yomaleko eli-10.
Kuba prototype ngokukhawuleza, singakwazi ukugqiba imveliso prototype enye emacaleni kunye nebhodi maleko ezimbini ngaphakathi kosuku olunye okanye iintsuku ezimbini, iintsuku 3-4 umaleko 4, iintsuku 4-5 6 maleko, iintsuku 5-6 iintsuku 8 umaleko, 6 -7 Iintsuku zebhodi e-10.
Ngaphantsi kosuku lokusebenza, ixabiso libiza kakhulu.
Emva kokwamkela iodolo yakho, injineli yethu iya kuziphicotha iifayile zakho zeGerber ukuqinisekisa ukuba iyangqinelana nobuchule bethu bobuchwephesha. Nje ukuba iifayile ziludlulise uphicotho-zincwadi, ungahlawula iindleko. Ke injineli yethu iya kujonga kwakhona kwaye isebenzise iifayile ukwenza imveliso. Ngamanye amaxesha umbuzo wobunjineli uya kuvusa.
Ukugqiba imveliso ngexesha, kufuneka uphendule imibuzo yobunjineli kwinjineli yethu ngexesha ngokukhawuleza.
Ixesha elichithwe kumbuzo wobunjineli alibalwanga njengexesha lemveliso.
Ukuba u-odola emva kwexesha le-P5.00 ye-china, ixesha lokuvelisa liya kubalwa ukusukela kusuku olulandelayo.
Egqithileyo Umthamo Low zonyango PCB Assembly
Ukucwiliswa kwebhodi yegolide esekwe kwibhola enye
I-3 oz solder mask yokufaka i-ENEPIG ngobhedu obunzima b ...